Sarcoma ကင်ဆာ - ရောဂါပျောက်ကင်းမှုအခွင့်အရေးပိုကောင်းစေရန်အတွက် ကြိုတင်စစ်ဆေးတွေ့ရှိခြင်း
ပင်မစာမျက်နှာကျန်းမာရေးအချက်အလက်စက်တင်ဘာလ 2019Sarcoma ကင္ဆာ - ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းမႈအခြင့္အေရးပိုေကာင္းေစရန္အတြက္ ၾကိဳတင္စစ္ေဆးေတြ႕ရွိၿခင္း
սեպտեմբերի 03, 2019 CancerExcellenceMadePossibleHorizonCancerCenterSarcoma
“Sarcoma ကင်ဆာသည် ကြိုတင်စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါက ကုသရာတွင် အလွန်ထိရောက်သည့် အခြားကင်ဆာများနှင့် ဆင်တူသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ပြန့်ပွားမှုအဆင့်ရောက်သည့်အဆင့်ရောက်မှသာ ကင်ဆာရောဂါစစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ပျောက်ကင်းမှုနှုန်း အလွန်နဲသည်။”
Sarcoma ကင်ဆာသည် အလွန်ရှားပါးသောကြောင့် သင် ကြားဖူးလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း အသေအပျောက်နှုန်းသည် အလွန် မြင့်မားသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် လူပေါင်း ၁.၅ သန်းမှ ၁၂,၇၅၀ ယောက်သာ နှစ်စဉ် ရောဂါစစ်ဆေးမှုရှိပြီး နှစ်စဉ် လူပေါင်း ၅,၂၇၀ ယောက် အသေအပျောက် ရှိသည်။ ဤကင်ဆာအမျိုးအစားအား ပိုမိုသတိပြုမိစေရန်အတွက် ဇူလိုင်လကို Sarcoma လအဖြစ် သတ်မှတ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
Sarcoma သည် အဆက်တစ်သျှူးများတွင် တွေ့ရသည့် ကင်ဆာအမျိုးအစားတစ်ခု၏ အထွေထွေစကားရပ်တစ်ခု ဖြစ်သည်။ Sarcoma အမျိုးမျိုးရှိပြီး ဤဆဲလ်များသည် အရိုးဆဲလ်၊ အရိုးနု၊ သွေးကြောနှင့် stem ဆဲလ်များတွင် ဖြစ်ပွားနိုင်သော်လည်း ကင်ဆာကို အရိုး sarcoma နှင့် တစ်ရှူးပျော့ sarcoma ဟူ၍ အဓိကအားဖြင့် ၂ မျိုး ခွဲခြားထားသည်။
အရိုး Sarcoma ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ?
အမည်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့ အရိုးတွင် ဖြစ်ပွားသည်။ လူနာများသည် ဖြစ်ပွားသည့် အရိုးတွင် နာကျင်မှု ခံစားရပြီး ညဖက်တွင် ပိုမိုနာကျင်သည်။ ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့် ကိုယ်ခန္ဓာကိုက်ခဲခြင်းသည် အခြားရောဂါလက္ခဏာများ ဖြစ်သည်။
တစ်သျှူးပျော့ Sarcoma ဆိုသည်မှာ ဘာလဲ?
တစ်သျှူးပျော့များသည် ကြွက်သားမှ အာရုံကြောများနှင့် သွေးကြောများအထိ အမျိုးအစားနှင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသောကြောင့် တစ်သျှူးပျော့ sarcomas အမျိုးအစားပေါင်း ၅၀ ကျော် ရှိသည်။ လူနာများသည် အစိုင်အခဲ သို့မဟုတ် အသားပို (နာကျင်မှုလက္ခဏာရှိ သို့မဟုတ် နာကျင်မှုမရှိဘဲ) ပြခြင်း သို့မဟုတ် လုံးဝလက္ခဏာ မပြခြင်း ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း အစာချေဖျက်မှုစနစ်ကင်ဆာအတွက် ဝမ်းဗိုက်နာကျင်ခြင်း၊ မအီမသာဖြစ်ခြင်း တွေ့ရှိရတတ်သည်။
Bumrungrad အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆေးရုံရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကင်ဆာရောဂါကုပါရဂူ တွဲဖက်ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Theera Umsawasdi မှ “Sarcoma ကင်ဆာကို ကြိုတင်စစ်ဆေးတွေ့ရရှိပါက ကုသရာမှ အလွန်ထိရောက်တဲ့ အခြားကင်ဆာများနှင့် ဆင်တူပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ပြန့်ပွားမှုအဆင့်ရောက်မှသာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက ပျောက်ကင်းမှုနှုန်း အလွန်နဲပါတယ်” ဟုရှင်းပြသည်။
ဒေါက်တာ Theera မှ “ခွဲစိတ်ခြင်းကို ပထမ အမြဲစဉ်းစားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ sarcoma က အလျှင်အမြန် ပြန့်ပွားနိုင်လို့ ခွဲစိတ်မှု တစ်ခုတည်းနဲ့တော့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ကီမိုဓာတုကုထုံး နှင့်/သို့မဟုတ် ရေဒီယိုလှိုင်းကုထုံး တွဲဖက်ကုသသင့်ပါတယ်။ အဖြေက အားရစရာ မရှိသေးပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ sarcoma ဖြစ်ပွားမှုနဲပါးတော့ သုတေသနလုပ်ငန်း နှောင့်နှေးလို့ပါဘဲ” ဟု ဖြည့်စွက်ပြောပါသည်။ သို့သော်လည်း ဆေးပညာသိပ္ပံတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးခြင်းသည် ကင်ဆာဆဲလ်ဖြစ်ပျက်ပုံကို နက်ရှိုင်းစွာ နားလည်စေသည်။ ဆဲလ်များကို ခွဲခြားခြင်းမရှိဘဲ သတ်ပေးသော သာမန်ကီမိုဓာတုကုထုံးလိုမျိုး မဟုတ်ဘဲ ကင်ဆာဆဲလ်အတိအကျကို ဦးတည်ရည်ရွယ်သော ကုထုံး သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကို ကျွန်ုပ်တို့ ယခု လုပ်ပေးနိုင်ပါပြီ။ လူနာ၏ခန္ဓာကိုယ်မှစတင်ပြီး လူနာတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကင်ဆာဆဲလ်များသည် ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုတည်းတွင် ဖြစ်ပွားသည်ဖြစ်စေ တမူထူးခြား ကွဲပြားခြားနားသည်။ လူနာတစ်ဦးတည်းမှဖြစ်သော်လည်း ကင်ဆာဆဲလ်များသည် ကွဲပြားသည့် ကိုယ်ခန္ဓာအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအလိုက် မတူညီကြပါ။ ဤကွဲပြားခြားနားခြင်းသည် ကုသမှုတွင်လည်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိသည်။ Horizon ကင်ဆာဌာနရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ Comprehensive Genomic Profiling သည် တစ်ဦးချင်းစီအတွက် အဖြစ်နိုင်ဆုံးကုသမှု ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ဆရာဝန်သို့ ပေးနိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်
Sarcoma ကင်ဆာရောဂါလက္ခဏာများကို အလွယ်တကူ သတိပြုချင်မှ ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ခန္ဓာကို ပုံမှန် စောင့်ကြည့်လေ့လာ သွားရန် အကြံပြုပါသည်။ မူမှန်သည့်လက္ခဏာတွေ့ရှိရပါက တိကျမှန်ကန်စွာစစ်ဆေးရန် အချိန်မီ ထိရောက်စွာကုသမှုခံယူနိုင်ရန်အတွက် ဆရာဝန်နှင့် ရက်ချိန်းရယူပါ။